I-Cozy Getaway-imizuzu ukusuka elunxwemeni nasedolophini
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguKen
Wamkelekile kweli khaya lingaselwandle kude nekhaya. Eli khaya libekwe kwindawo enobuhlobo kusapho kanye kumbindi we-Isle of Palms. Le studio yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela abantu ababini!
Ukongeza, indawo engasemva yindawo entle yokuxhoma kwaye inokusetyenziswa nanini na xa ufuna! Relax kwaye ujingi kwibhentshi phantsi kwe-pergola. Iindwendwe zikwamkelekile ukuba zisebenzise iimfuno zaselwandle (izitulo, inqwelo yaselwandle njl.njl).
Nceda uqaphele ukuba i-studio iqhotyoshelwe kwindlu enkulu kunye nomnyango ohluke ngokupheleleyo.
Isitudiyo sinebhedi egcweleyo, indawo yokulala yesofa, indawo yokuhlala, isinxibo, igumbi lokugcina, isilingi yecathedral, ifan yolawulo olukude kunye neyunithi ye-ac. I-Wifi ibandakanyiwe kunye ne-tv yesikrini esisicaba kunye nentambo ye-TV ethe ngqo. Ikhitshi elincinci liza lixhotyiswe ngefriji, isinki, i-oveni yeconvection/toaster, imicrowave, ikeurig, ikofu, iti njl. Igumbi lokuhlambela libandakanya ishawa yokuma. Sinikezela ngazo naziphi na izinto zangasese eziyimfuneko, iitawuli kunye neelinen.
Nceda ungatshayi, ungadli, okanye izilwanyana zasekhaya.
Sijonge phambili ekukumkeleni kwaye sikuvumele ukuba ubone ukuba zonke i-Isle of Palms zibonelela ngantoni!
5.0 · Izimvo eziyi-112
Ulwandle lumgama omfutshane weebhloko ezi-4. I-Marina yasekhaya ibonelela ngemisebenzi eyonwabisayo, ukurenta izikhephe, kunye nemarike yokutya kunye nezipho. IDowntown Isle of Palms (Front Beach) kukuqhuba nje ngokukhawuleza ukuya ezivenkileni, kwiindawo zokutyela, kunye nokuzonwabisa. Ivenkile yegrosari yasekuhlaleni ikumgama weemayile.
Ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele: Esi situdiyo sincanyathiselwe kwikhaya lethu kodwa sinomnyango owahluke ngokupheleleyo kunye nokhuseleko oluninzi. Sikwavumela ukungena kwigumbi lethu lokuhlambela impahla ekwabelwana ngayo ukuba kuyimfuneko.
Ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele: Esi situdiyo sincanyathiselwe kwikhaya lethu kodwa sinomnyango owahluke ngokupheleleyo kunye nokhuseleko oluninzi. Sikwavumela ukungena kwigum…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Isle of Palms